Fanamafisana ny substrate | Reef Resilience
Ny fanamafisana ny substrate dia mifantoka amin'ny fanaovana ny rafitry ny vatohara voajanahary ho mety kokoa amin'ny fanarenana ny haran-dranomasina, indrindra ny fametrahana ireo olitra vaovao. Ny fomba iray hanatsarana ny substrate mba hampiroboroboana ny fanarenana ny haran-dranomasina dia ny fanesorana ireo ahidrano izay mety hiteraka fahafatesan'ny haran-dranomasina sy ny aretina, hampihena ny fitomboan'ny haran-dranomasina ary ny famerana ny fametrahana ny vatohara.
Ny trondro sy ny gidro dia mpilatsaka an-tsokosoko ao amin'ny firafitry ny haran-dranomasina rehefa mifehy ny macroalgae izy ireo izay afaka mifaninana sy mifoka ny fananganana ny vatohara ho an'ny vatohara na ny fananganana coral vaovao. Fiarovana ny herbivore dia tetikady fitantanana manan-danja amin'ny fiarovana ireo haran-dranomasina ary manampy azy ireo ho matanjaka kokoa amin'ny fiovan'ny toetr'andro. Ny fiarovana ny herbivore amin'ny alalan'ny fitsipika momba ny fanjonoana na ny MPA dia fitaovana famerenana amin'ny laoniny izay mikendry ny hamerenana indray ny fikolokoloana ara-tontolo iainana manoloana ny vatohara voahodina.
Mety misy ny toe-javatra izay tsy ahazoana algée ny herbivores na dia misy fiarovana aza. Ireo fomba fiasa hafa na ampiasain'ny mpitantana amin'izao fotoana izao dia ahitana fanesorana ny tanana amin'ny mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina, ny fampiasana teknolojia hanalàna ala, ary ny fambolena sy ny famerenana amin'ny laoniny ny populaire.
Mpanamboatra teknolojia any Kaneohe Bay, Hawai'i manadio ny paty sarobidy voasaron-tavoahangy miaraka amin'ny Super Sucker. Sary © Ian Shive
Famaranana algae: Ny fantsom-panafody amin'ny alàlan'ny fantsom-pahombiazana dia natao tamin'ny fahombiazan'ny nosy Hawai'i. Ao Hawai'i, maro ireo karazana algan'ny karazan-javamaniry dia mihamitombo, ka miteraka fiantraikany ratsy eo amin'ny fiompiana fako. Ao amin'ny 2003, ny Nature Conservancy (TNC) any Hawai'i dia nanomboka niasa mba hanesorana ireo alika mandalo amin'ny tànana samihafa amin'ireo mpilatsaka an-tsitrapo ao amin'ny vondrom-piarahamonina, anisan'izany ny mpifanolo-bodirindrina, ny sekoly, ny mpampianatra, ny tompona orinasa eo an-toerana, ary ny mpianatry ny oniversite. Ny TNC dia nampiofana mpikambana ao amin'ny vondrona mba hanohy ny fanarahamaso sy ny fanesorana ny ezaka amin'ny kitapo izay ahitana ny 1) amin'ny fanaraha-maso ny faritra ao an-toerana ho an'ireo karazam-bary mitrandraka; 2) karatra misy rano tsy voatanisa mba hamantarana algina vahiny; 3) raha misy ny fanazavana momba ny ala; 4) momba ny fomba fanesorana; ary 5) fomba fampiasana algà ho an'ny entona na ny fihinanana sakafo.
Algae-fanesorana teknolojia: Ny ezaka fanesorana ny torolàlana dia mety hitranga amin'ny tontolon'ny rano na amin'ny SCUBA. Mba hanesorana aloeso avy amin'ny halalin'ny halaliny saingy mbola mahatratra ny fahombiazana amin'ny fanesorana ala maro be, ny teknolojia antsoina hoe 'Super Sucker' dia novolavolaina ary ampiasain'ny mpiasa TNC any Hawai'i. Ny Super Sucker dia ahitana tavoahangy midadasika izay manondraka algôma avy amin'ny vatohara ary mandranitra izany amin'ny sambofiara izay alahan'ireo mpiasa voaofana. Ireo algônina fanosihosena dia napetraka ary alefa any amin'ny tantsaha ao an-toerana mba hampiasaina amin'ny endri-bozaka. Io fomba fanao io dia nahomby indrindra tamin'ny famerenana tamin'ny fomba ofisialy ny toerana avo lenta izay lavitra lavitra, na ny fampiasana ny fanesorana ny tanana dia tsy mahomby na tsy azo atao.
Fambolena valizy: Ny mpitantana sasany dia mazoto mamboly sy manetsiketsika arina mba hampivoarana ny dingana voajanahary voajanahary amin'ny haran-dranomasina. Anisan'izany ny urchin lava lava, Diadema antillarum, any Karaiba ( misokatra amin'ny varavarankely vaovaoISER Caribe webinar) sy ny urchin, Tripneustes gratilla, any Hawai'i. Ny fambolena laboratoara dia manampy amin'ny fametrahana ny toeram-ponenana sy ny fandraisana mpiasa izay ahafatesan'ny arina maro. Ny tanjon'ny fambolena dia ny fanangonana kolon-tany, ny fitomboan'ny mpanjanaka ho lasa tanora olon-dehibe ao amin'ny laboratoara izay ahafahana manara-maso akaiky ny toe-draharaha, ary manangona rambony amin'ny tranom-borona voajanahary. Hetsika hafa no nodinihina mba hampitombo ny mponina ao amin'ny ranomasina, toy ny fanorenana vatoharan-javamaniry izay manome alika honina amin'ny biby miafina miafina avy amin'ny biby mpihaza, ary ny fameperana amin'ny fanjonoana ny vorona mpihaza (ohatra: triggerfish sy lozisialy lehibe kokoa) izay afaka manohana ny fanarenana ny urein mponina. Ny ankamaroan'ity asa ity dia mitoetra ao amin'ny dingana fikarohana. ref
Ny valan-javaboary an-dranomasina dia matanjaka ao anaty tafo marin-drano voafantina mba hanampiana amin'ny fanesorana alaola amin'ny alàlan'ny vatosoa. Sary © Ian Shive
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAsa famerenana amin'ny laoniny: Zava-nisongadina nandritra ny folo taona niarahan'ny fiaraha-miombon'antoka teo amin'ny fiarovana ny natiora sy ny ivon-toeram-ponenana an-dalam-pivoaran'ny fitantanana ny ranomasina sy ny atmosferamanokatra fisie PDF
Famerenana ny lemana haran-dranomasina: Tombontsoa amin'ny fanesorana algae manintona ao amin'ny Webinarin'i Hawai'i
Manangana ny harambato fisamborana amin'ny alàlan'ny fanosihosena fanafody famonoana sy ny urchin biocontrol ao amin'ny Kāne'ohe Bay
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFamerenana amin'ny laoniny Diadema - tranokalan'ny ISER Caribe sy Video